अस्ट्रियाबाट बेलायतको लागि कार आयात गर्दै | मेरो कार आयात
बेलायतमा तपाईंको अस्ट्रियन कार आयात गर्ने हात चाहिन्छ?
यदि तपाईंको कार पहिले नै यूनाइटेड किंगडममा छ भने, तब हामी कागजको साथ तपाईंको कार दर्ता गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं। यद्यपि हामी तपाईको अस्ट्रियन कारलाई युनाइटेड किंगडममा पुर्‍याउनका लागि सबै प्रक्रियाहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछौं, साथै दर्ता गर्नको लागि सबै आवश्यक चरणहरू सहित यदि कार यूनाइटेड किंगडमा छैन भने।
हामी रसदमा विशेषज्ञ हौं र तपाईको कारलाई युनाइटेड किंगडममा सुरक्षित रूपमा पुग्न सहयोग गर्न सक्छौं।
तपाईंले अस्ट्रियाबाट आफ्नो कार आयात गर्न कति कर तिर्नु पर्छ?
अस्ट्रियाबाट बेलायतमा कार आयात गर्दा यो गर्न सम्भव छ वास्तवमा कुनै कर तिरेको बिना। अनुमति छ कि कार दुबै6महिना भन्दा पुरानो हो र नयाँबाट 6000००० किलोमिटर कभर छ। HMRC को नजरमा कुनै पनि कम एक नयाँ कार को रूप मा मानिन्छ, यसकारण तपाईं VAT तिर्नु पर्छ - तथापि, प्राय जसो केसहरुमा फिर्ता दावी गर्न सकिन्छ।
अस्ट्रियन कार परिमार्जन र प्रकार अनुमोदन
अस्ट्रियाबाट १० बर्ष भन्दा कम उमेरका कारहरूका लागि, उनीहरूले युके प्रकारको अनुमोदनको पालना गर्नुपर्नेछ। हामी या त यो प्रक्रिया पारस्परिक मान्यता भनिन्छ वा मार्फत गर्न सक्छौं IVA परीक्षण.
अस्ट्रियाका बाँया हात ड्राईव कारहरूलाई केही परिमार्जनहरू आवाश्यक हुन्छन्, जसमा हेडलाइट ढाँचामा आउने ट्राफिकको उज्यालोपनाबाट जोगिन, स्पीडो प्रति घण्टा पढ्नको लागि माइल प्रदर्शन गर्न र पछाड कुहिर प्रकाश यदि यो पहिले नै सर्वव्यापी रूपमा अनुरूप छैन भने।
EU बाट तपाईंको कार आयात गर्दै
तपाइँको EU कार दर्ता गराउने बारेमा अधिक पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ?
EU बाट तपाईको कार आयात गर्दै
हामी पूर्ण अस्ट्रियन कार आयात सेवा प्रस्ताव गर्दछौं
अस्ट्रियन कारहरू आयात गर्ने बारे प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
के हामी अष्ट्रियाबाट तपाईंको गाडी ढुवानी गर्न सहयोग गर्न सक्छौ?
बिल्कुल - हामी अस्ट्रियाबाट युनाइटेड किंगडममा तपाईंको गाडी पुग्नको सम्पूर्ण प्रक्रियाको ख्याल राख्न सक्छौं।
के IVA परीक्षणको कुनै फाइदा छ यदि मेरो गाडी CoC दर्ता गर्न सकिन्छ भने?
कारमा निर्भर गर्दै तपाई सस्तो रोड ट्याक्सबाट फाइदा उठाउनुहुनेछ जब पंजीकरणको लागि मार्ग IVA परीक्षणको साथ हुन्छ जब अनुरूपताको सर्टिफिकेटको तुलनामा।
के मेरो अस्ट्रियन गाडी बिमा गरिएको छ?
अस्ट्रियाबाट तपाईंको गाडीको ट्रान्जिटको बखत यो बीमा गरिएको छ। जबकि अनसाइट यो कुनै दुर्घटना को मामला मा कभर छ।
के म यो कार दर्ता भइरहेको अवस्थामा मेरो कार चलाउन सक्छु?
यदि तपाईंको बीमा तपाईंलाई त्यसो गर्न अनुमति दिन्छ र हामी तपाईंको दूर हाम्रो दर्ता वा समान-दिन रेजिष्ट्रेसन सेवा प्रयोग गरी तपाईंको गाडी दर्ता गरिरहेका छौं जुन गाडीमा निर्भर गर्दछ।
मेरो अस्ट्रियन वाहन पहिले नै युनाइटेड किंगडममा छ - के तपाईं अझै मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी तपाईंको अस्ट्रियन गाडीको आयातको कुनै पनि चरणमा मद्दत गर्न सक्दछौं। केवल हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि कुन चरणमा आयात हो र तपाईंको उद्धरण तदनुसार समायोजित हुनेछ।
अस्ट्रियन कारहरूको प्रकार